IZITULO EZI-20 EZIPHOLILEYO ZOKUHLALA KWIGUMBI LOKULALA - UYILO LWEGUMBI LOKULALA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokulala Izitulo ezi-20 eziPholileyo zokuHlala kwigumbi lokulala
Wamkelekile kwigalari yethu yemifanekiso yezihlalo ezipholileyo ezixhonyiweyo kwigumbi lokulala. Isitulo esijingayo sinokuphakamisa indawo yokulala kwaye senze indawo emnandi yokujija ngencwadi, ukonwabele ukujonga kwigumbi lakho, okanye ujonge ngaphandle kwaye uphumle. Apha ngezantsi uyakufumana iindidi ngeendidi zezimvo zesitulo ezijingayo zokukunika inkuthazo yokuhombisa igumbi lakho.
Oku kuyabona ngotshintsho lwesitulo se-bubble esilingana ngqo kwigumbi lokulala lale ntombazana, kunye nomthunzi wayo we-Contemporary of purple and geometric green curtains. Ukuxhonywa kunye nesihlalo esijingayo sisibane sesitayile somfuziselo wangoku ngaphezulu kweqhosha elimhlophe elenziwe ngesakhelo sebhedi yesikhumba. Isitulo esixhonyiweyo senziwe sikhululeke ngakumbi ngomqolo omhlophe kunye nesihlalo sokugcina kunye nokuqaqamba moss oluhlaza moss. Senziwe nge-acrylic kunye ne-chrome yentsimbi eyenziwe ngetyathanga, esi sihlalo sijingayo siqinile kwaye sinokumelana nokujija okuhle.
Izimvo zikaSihlalo weSwing Swing
Usihlalo oxhonyiweyo weengcamango zokulala
Usihlalo oxhonyiweyo kwigumbi lokulala lamantombazana
Izitulo ezixhonyiweyo ezipholileyo
Igumbi lokulala lomntwana onesitayile esine-stylish zibonisa isihlalo esijingayo se-rattan kufutshane nefestile ejingiswe kabini, sivumela ukukhanya okuninzi kwendalo. Isitulo sisecaleni kwebhedi enkulu emhlophe emhlophe kunye nekalika eluhlaza eluhlaza. Imibala eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neepateni eziluhlaza kwiphepha lodonga, ukolulwa kwebhedi kunye namakhethini abonakalisiwe kwimilo yokuphosa kunye nesihlalo sokuhlala esisetyenzisiweyo kwisitulo sokujikeleza kwe-rattan. Igumbi lonke ligqityiwe kwiziko lalo ngokuxhoma isitayile seentsiba zentsimbi kwindawo yokuphumla yokuprinta yaseMorocco.
Izitulo ezijingayo zinokubonakala ngathi yinto nje entsha enokuba nayo endlwini — into onokuyijikeleza ujonge njengenye nje yeengxelo. Nangona kunjalo, xa unikwe useto olufanelekileyo kunye nesitayile, inokuba yenye yezona zinto zisetyenzisiweyo zefenitshala onokuyifaka. Zininzi izinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe xa kufikwa ekukhetheni isihlalo sakho esitshintshayo.
Ixabisa malini umtshato omncinci
Ukunyuka –Kudla ngokubakho ukucwangciswa kabini kwesitulo esijingayo okanye esijingayo, ukuze sixhonywe kwisiseko esomeleleyo emhlabeni ukusuka kwintonga yesitayile sentlanzi, okanye ukuba nentambo okanye uthotho lweentambo eziqhotyoshelwe eluphahleni ukuxhasa isitulo. Isitulo esijingayo nesiseko sikhethwa ukuba ifenitshala yenzelwe ukuba ishukunyiswe igumbi.
Ikwayindlela ebhetele yokuqwalaselwa ngaphandle ukuze igcinwe ngokukhuselekileyo ngexesha lemozulu embi. Kwelinye icala, isitulo sokuxhoma isilingi silungile kubantu abafuna ukufumana ukujija ngakumbi kwisitulo sabo, ukubonelela ngerediyo enkulu yokujinga. Ukongeza, ikwisiqwenga esikhulu sencoko kwaye, xa usebenzisa ii-tethers ezahlukeneyo zesilingi, inokubanakho indawo enkulu yokuhlala. Okokugqibela, isitulo esixhonyiweyo esigciniweyo sigcina kwisithuba somgangatho, njengoko sihamba nje phezu komhlaba.
Indawo -Kubalulekile ukuqwalasela ukuba isitulo sizakubekwa phi, ngakumbi ukuba sisegumbini lokulala. Ukuyibeka kufutshane nefestile kungumbono olungileyo, kuba yindlela entle yokujonga ngaphandle nokwandisa umoya omtsha ovela ngaphandle. Ukuba ubeka kufutshane nebhedi, kubalulekile ukuba uqaphele umgama, njengoko abasebenzisi banokungqubeka kuwo xa kumnyama. Kukho ukhetho lokuyixhoma embindini wegumbi njengeyona ncoko iphambili. Oku kulunge kakhulu kumagumbi apho iisilingi zizimbo zecawa yecawa, kunye nesihlalo esixhonyiweyo esifakwe encotsheni.
Izinto eziphathekayo -Ezinye zezinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuxhoma izitulo yi-rattan kunye ne-textile. Zombini ezi zikhetho zilungileyo kuba zilula, ziyaguquguquka, zomelele kwaye zivumela umoya ukuba udlule. Ezinye izitulo zokuxhoma zangoku zingenziwa nge-acrylic okanye ezenziwe ngezandla okanye nge-crochet. Ngokwesiqhelo isiseko kunye / okanye isakhelo sesihlalo siya kuba sentsimbi eyomeleleyo okanye i-aluminium egalelwe umgubo. Isinyithi asithambeki kangako kwimingxunya kwaye igoba, kodwa i-aluminium egutyungelwe ngumgubo ilula kwaye iyakumelana nokukrwela.
Uhlobo -Ukususela kumbala wayo, izinto kunye nesitayile, zininzi iindidi zokuxhoma nokujikisa izitulo ukuze zilungele nakuphi na ukumiselwa kwegumbi lokulala. Amagumbi okulala asesitayile sanamhlanje anokuthanda i-acrylic exhomekeke kwiqamza okanye iiprofayili zangoku ezenziwe ngerattan eyenziweyo. Amagumbi okulala ajolise kwi-cozier, isitayile esincinci se-cottage anokucinga ngokuya kwiipateni zendalo ze-abaca okanye uluya lweepateni ezinentambo / zentambo.
Izindwangu ezinzima zomsebenzi ezifana nekotoni kunye nelinen eyenziweyo yentente zikwangumbono olungileyo ukuba isihlalo senzelwe ezimbini, okanye ukuba isitulo siza kubekwa ngaphandle okanye kwigumbi eligcwele ilanga. Olunye uhlobo lwesitulo esixhonyiweyo yisitayile secocoon esigubungela umsebenzisi kwaye siza ngemibala eyahlukeneyo kunye noyilo. Fumana ezinye izimvo nge isitulo secocoon Apha.
Umama womyeni ilokhwe ezinde
Ukunceda -Ukunyanzeliswa yeyona ndlela ifanelekileyo yokufikelela kunye nokubeka ii-accents ezincedisayo kwisitulo esijingayo. Ngaphandle kokuzisa ibhalansi yobuhle esihlalweni, ikwadala amava okuhlala axhonywe ngakumbi. Ezinye izitulo ezixhonyiweyo zize zifike ngokuncedisa esele zifakiwe, ke kubalulekile ukuba umthengi avavanye isitulo okanye avavanye isitulo ngomqamelo, ngaphambi kokuzibophelela kwigumbi labo lokulala elitsha.
Igumbi lokulala laseBohemian liqala ngeendonga ezimhlophe kakhulu kunye nomgangatho weplanga othulisiweyo. Iseti enkulu yeefestile kunye Iingcango zaseFrance kwiimitha ezimhlophe ezikhokelela ngaphandle kwaye zijikelezwe sisithambiso esinzima sokhrimu. Isitulo esixhonyiweyo somsonto songeza imibala efudumeleyo kwigumbi, sikhanyisela ngokuqaqambileyo umbala ohlaza okwesibhakabhaka noluhlaza osetyenziselwa ibhedi. Ikwabonisa ipateni ye-antique yeti yeplanga yebhodi yentloko exhomekeke eludongeni olumnyama nolumhlophe lwefoto.
Igumbi lokulala elixineneyo libonisa ibhedi enemaleko emibini kunye nendawo yokugcina idrowa ngaphantsi kweenkuni ezimhlophe. Iindonga ziluhlaza okwesibhakabhaka, ngelixa amakhethini abonisa iipateni zejiyometri ezijikeleziweyo. Elinye igumbi libonisa izinto zoyilo ezingqukuva ezinje ngezitulo zenyawo ezibini ezinyaweni zebhedi, izipili zodonga ezibekwe ezibukweni, kunye nesitayile semihla yokuhombisa.
Eyona nto iphambili kweli gumbi sisihlalo sayo esixhonyiweyo se-rattan, senziwe ngeesetyhula iipateni ezilukiweyo kwaye zenziwe ngombala omdaka ngombala omdaka-luphawu oluhle kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka osetyenziswe kwigumbi lonke. Ibhedi yosuku eneqonga enomdla kunye nokugcina ihonjiswe ngee-ottomans ezimbini kunye neepilo eziluhlaza. Bona Okuninzi iintlobo zeebhedi kwiphepha lethu legalari.
Ngomthamo wee-175 lbs., Esi sitayile seKhontrakthi senziwe ngezinto zerattan zilungile kwigumbi lokulala elivisayo elisebenzayo. Ukuxhonywa ngentambo eluphahleni, intambo kunye nokudityaniswa kwezinto ze-rattan sisincoko esihle kweli gumbi leendonga ezimnyama eziluhlaza kunye neefreyimu ezimhlophe zeefestile, iitrayi kunye nedesika. Ikhaphethi, nayo yenziwe kwilaphu elilukiweyo lezinto eziphilayo, ikwasebenza njengesiqalo kumgangatho omfutshane womthi.
Ebunjiwe njengenyanga, esi sihlalo sijingayo sihamba kakuhle ngoku kunye negumbi lokulala langoku. Ngesiseko esizinzileyo somgubo osinyithiweyo wentsimbi kunye nentsimbi engenasici, isihlalo somelele ngokwaneleyo ukuba sijike, kodwa sikhululekile ngesihlalo saso selaphu. Isitulo esimhlophe sisongezo esilungileyo kwigumbi elimhlophe kunye nelimvi elinamagama aluhlaza kwindawo yalo yokulala kunye nezixhobo. Igumbi lonke libonisa iipateni ezingwevu nezimnyama eziluhlaza kunye namaziko kwisitayile esiliqili somda wekhandlela.
izipho zomtshakazi ezivela kumyeni
Esi sihlalo sokulenga i-bubble lulongezo lokudlala kwigumbi lokulala lentombazana enemibala. Umqamelo wokuphosa esihlalweni ngumdlalo ofanelekileyo kwiphepha eliseludongeni elikhanyayo leentyatyambo. Elinye igumbi libonisa ngakumbi iitoni ezimhlophe ezithulisiweyo kwindawo yokulala, isakhelo sebhedi, ifenitshala kunye nekhaphethi. Umpop wombala oqinileyo ubolekwe sisibane setafile eluhlaza okwesibane.
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya malunga nesi sihlalo sebhola esixhonyiweyo ukusuka: IAmazon
Eli gumbi lokulala labantwana bemihla ngemihla libonisa udonga lwemifanekiso eqingqiweyo kwizakhelo ezimhlophe eziMhlophe, ezijinga kwilaphu eliseludongeni elimfusa. Isetyenziswe macala onke egumbini, unyango lodonga emfusa lubonakaliswa kwiimpawu ezimfusa ezikwisakhelo sebhedi, amashiti okulala, izibane zesibane, kunye nokujula imilo kunye nokuhlala esihlalweni kwisitulo se-bubble esijijayo. Ingubo emhlophe ye-shag ibekwa phantsi kwebhedi kwaye ichukumise ecaleni, ikhokelela kwidesika esebenzayo, umfana omde kunye nosihlalo ojingayo.
Esi sihlalo sijingayo sifana nentente ekubunjweni kwayo nelaphu elinzima kodwa elibhityileyo lisigcina siphakamile. Oku kuhambelana kakhulu nemikhukhu yaselwandle yokuziva kweligumbi lokulala labakwishumi elivisayo, igqityiwe nge-pet reptile terrarium. Iimpawu zesitayile saselwandle kunye neleli yoqalo ilenga ukuxhasa umoya wokuzonwabisa wesitulo esixhonyiweyo, kwaye iyagxininiswa ngakumbi ngumzobo webhodi yokubhabha eludongeni kunye neebhedi ezilala ngombala oluhlaza.
Eyona nto uyithandayo kumagumbi okulala abonisa umbala omnye oqinileyo, isitulo sebhola esixhonyiweyo lulongezo olukhulu kolu hlobo lwale mihla igumbi lokulala lamantombazana kwigumbi eliphezulu. Kubekwe ekoneni, ibhedi enesitayile seenkosazana yandlalwe ngombhoxo onobuso ezinyaweni zayo, kwaye ijongane nesihlalo esixhonyiweyo ecaleni kwayo. Isetyhula yento efanayo, isitayile esikhulu sangoku esijingayo esinamaphiko akhanyisa igumbi lonke.
Eli gumbi lokulala lesitayile le-Etsy libonisa izinto ezininzi ezenziwe ngesandla ezijikeleze iikhaphethi ezimhlophe ezicocekileyo kunye neendonga ezingwevu. Ukuqala ngepom pom quilted ombre bedheets, kwigumbi likwanemizobo yokuphinda yenziwe umzobo ngaphezulu kwebhodi yentloko kunye nentambo yeentsiba. Isitulo esixhonyiweyo, esidityaniswe kwintambo enemibala ye-aqua kunye neepateni zeentyatyambo, sime kanye ecaleni kwefestile enkulu evulekileyo, engqamene nemibala eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngesihlalo esixhonyiweyo kwisitayile sehlabathi, indawo yokulala enesitayile seContemporary, le inika usihlalo i-vibe ephucukileyo ngokunika isiseko setyhula esibanzi kunye ne-pole hook yentsimbi engenasici. Ibekwe kweli gumbi lisetyhula, uthotho lweefestile eludongeni olungaphandle luzisa ukukhanya kwendalo okuninzi kwaye zivelise imibala eqaqambileyo yeendonga ezimfusa ezikhanyayo, ikhaphethi enemibala ye-cream enemibala ekhanyayo kunye nemilo yokuphrinta yejometri. Inja epeyintiweyo exhonywe ngentla kwebhedi ibopha igumbi ndawonye ngendlela yangoku.
Eli gumbi lokulala lendlela yesimanje liqukethe isitulo sebhabhile esijingayo nesilver cushioning esihamba kakuhle ngeesetyhula iibhedi zebhedi zesilivere kunye neepinki zentliziyo ezipinki. Elinye igumbi lenzelwe kwiindonga ezingwevu zokukhanya ezingathathi hlangothi, iplanga elinemigangatho enzima yomthi kunye nedesika ende emiselwe ezimbini ezibaleka eludongeni olunye. Isibane esijingayo esinemibala kunye nesitayile se-mosaic esipeyinti esiseduze kwebhedi zezona zinto zinemibala kwigumbi.
Esi sihlalo sentaka sijija isihlalo sibonisa ukuhonjiswa kwesihlalo esimhlophe kunye nentsimbi engenasici kwisiseko sayo esomeleleyo esime njengo-U. Igumbi elimpunga elikhanyayo linemibala ye-mauve engathathi hlangothi kwi-drapery, ukusasazeka kwebhedi kunye ne-shag rug ezinyaweni zebhedi. Ngaphandle kokuziva kwayo kulula, isihlalo sentaka sinika eli gumbi ithuba lokudlala.
izimvo zomtshato zomyeni
Igumbi lokulala elicocekileyo libonisa isitulo sentaka esixhonyiweyo sentaka kwikona enye, ngasezantsi yomgangatho omkhulu kwifestile yesilingi ekhokelela kwibhalkoni. Ibhalkhoni ihonjiswe ngesitulo sokuphumla kunye nesitulo esincinci seContemporary Chinese ceramic. Isitulo esimnyama esimnyama esimnyama sihamba kakuhle kunye neendonga ezimhlophe zangaphakathi kunye nemigangatho eshushu yomthi. Ipateni yombala wejometri kunye nesipili esikhulu sesilivere esinegolide ebalaselisa uluvo lwendawo, ngelixa iglasi efakwe kwitafile yokubonisa iyinika i-bohemian vibe.
Ukusekwa ngokuchasene nemvelaphi encinci yodonga olumhlophe kunye nekhethini elide, esi sihlalo sixhonywe phantsi kumgangatho wolongezo olufanelekileyo kwigumbi elincinci. Ukufezekisa ukusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle, isakhelo senziwe ngesinyithi esomeleleyo kwaye ukuqiniswa okukhoyo kufumaneka kwimibala eyahlukeneyo engathathi hlangothi. Kukho ukhetho lokuxhoma isitulo esilingini endaweni yokusebenzisa isitendi.
Inyembezi yaphosa isitulo sokuguqula isitulo: Jonga IAmazon
Isitulo sokuxhoma sentaka esi sihlalo sibonisa iipateni ezingaqhelekanga ze-rattan kumnyama macala onke esihlalweni saso, esibonisa umqamelo wesihlalo esimhlophe. Ibekwe kwifestile enkulu yemifanekiso enefreyimu emnyama ebanzi, isitulo sisongezo esihle kunxweme lwendalo lwangaphandle, kwaye siyancediswa ngumgangatho weplanga odibeneyo weplani.
Sihlalo esijingayo esinomthombo wokuma: Bona kwi IAmazon
Esi sihlalo esimhlophe esimhlophe esimhlophe sokujikeleza esijikelezayo sisongezo esilula kulo naliphi na igumbi lokulala labaselula. Usihlalo unokwenziwa ngezandla kunye ne-DIY egumbini, elenza impelaveki emnandi yobugcisa kunye nokudibanisa. Kulo mzekelo, kuhamba kakuhle ngokuqinileyo igumbi lokulala elimfusa Iindonga, ikhaphethi eluhlaza ehlathini kunye nengqokelela yamatye kunye neepowusta zamatye.
Igumbi lomntwana elenziwe ikakhulu emhlophe linemibono emihle ngaphandle nangaphandle ngeefestile zayo ezinkulu. Ifenitshala yeenkuni ezimnyama, udonga olumhlophe oluqaqambileyo kunye nomgangatho omkhulu opeyintiweyo okwahlukileyo kunye neendonga ezimhlophe kunye nomthi womsedare. I-engile yekona eneefestile ezimbini ezinkulu lithuba elihle lesitulo se-textile esijingayo, esenziwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-orenji kunye nentambo-ilungele abantwana abatsha.
Ngolwazi oluthe kratya malunga noku kutyelelwa kwesitulo sehammock IAmazon
Iconic Ikhaya Uriella Ibhodi yebhodi yeVelvet Upholstered Nkqo enemigca yala maxesha… $ 206.97 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-119 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ingqokelela yeLakeide yoxinzelelo lweWindowpane Mirror- Ikhaya leRustic… $ 30.98 umthengisi ogqibelele (301) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Esi sihlalo sokuxhoma sikhululeke ngokupheleleyo sabantwana senziwe ngomqhaphu we-organic kwaye iza ngemibala egqamileyo, egqibeleleyo yokuqaqambisa igumbi lokulala. Usihlalo unokuxhonywa ngaphakathi nangaphandle okanye ngaphandle, kodwa kule meko, indawo elula eluhlaza yombhoxo ibekwe ngaphantsi kwayo kumgangatho weplanga okhanyayo. Ikwavela kwiindonga ezimhlophe ezimhlophe, ifanitshala yeplanga emhlophe emdaka kunye neengcango ezinkulu zaseFrance ezikhokelela ngaphandle zihonjiswe ngamakhethini amhlophe.
Isiqithi se-walkin closet
unxibe ntoni emtshatweni kaJanuwari
imibono yomqolomba kwigumbi lokulala
Iiflethi zomtshato ze-ballet zomtshato
iindawo zasimahla zokutshata e-washington state